विमान ला-7: विनिर्देशों, रेखाचित्र, फोटो
सोभियत विमान ला-7 OKB-21 (गोर्की, अब Nizhny Novgorod शहर -) मा सिर्जना गरिएको थियो। सबै भन्दा राम्रो सोभियत डिजाइनर मध्ये एक - उहाँले SA Lavochkin विकास भयो। यो विमान द्वितीय विश्व युद्ध को समयमा लडाई विमान सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम थियो। maneuverability र हतियार - उहाँले हावा श्रेष्ठता लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य संयुक्त।
ला-7 - विमान, जो एक monoplane (पखेटा को एक जोडी संग उपकरण) को रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। पायलट लागि - यो धनुष स्थित एक-इन्जिन, र एक सीट छ। यसको पूर्ववर्ती - 5-लडाकू विमान पनि 21 मिटर Edo विकास। (ला-120 कोड द्वारा) विमान को पहिलो प्रोटोटाइप नोभेम्बर 1943 मा बन्द गरे।
1944 को सुरुमा, सफलतापूर्वक उहाँले लडाई कर्तव्य लागि उडान परीक्षण र प्रायश्चित बित्यो। descended को वाहक देखि युद्ध को अन्त द्वारा 5,700 भन्दा बढी लडाकु ला-7। धेरै सोभियत पाइलटहरूले अनुसार, यो विमान थियो सबै भन्दा राम्रो: यसको चपलता, गति, विश्वसनीयता र firepower मूल्यांकन गर्छौं। यस्तो उच्च वर्ग लडाकूको को कर्ण मा तेस्रो रैह को कुनै पनि एक्का भन्दा विजय आत्मविश्वास बढाउनका।
ला-7 धेरै विमान को एक श्रृंखला को प्राविधिक विकास को परिणाम हो। धेरै पहिले देखा लडाकूको LaGG-2 (1939 मा विकास) र LaGG-3 (1940 औं)। आफ्नो सिर्जना पनि द्वारा डिजाइनर एम Gudkov र Gorbunov उपस्थित थियो। यसको वर्ग मा छिटो जर्मन विमान - दोस्रो लडाकु को 600 मी / घन्टा गति मा उडान सक्षम थियो। 600 किलो को याक-1 भन्दा बढी तर उहाँले भारी थियो। Maneuverability LaGG-3 र आरोहण चाहेको गर्न धेरै बाँकी छ।
1942 मा एक हल्का इन्जिन, राम्रो Stalingrad युद्ध मा सिद्ध संग ला-5 आए। नयाँ विमान यो रूपमा दुई 20-मिलिमिटर बन्दूक कैलिबर धेरै थियो उच्च गर्न "Messerschmitt" थियो, र तिनीहरूले दुई मिसिन बन्दुक संग पूरक, एक साधन संग "जर्मन" भन्दा बढी प्रभावकारी थिए।
ला-5FN लाइटर र नियन्त्रण गर्न सजिलो uprated इन्जिन, संग - 1943 मा, कुर्स्क युद्ध को समय मा, देशको वायु सेना लडाकूको नयाँ पुस्ता पाए। पनि नयाँ जर्मन "Focke-Wulf-190" सोभियत विमान को एक प्रतियोगी हुन सक्दैन। ला-7 - र अन्तमा, 1943 को अन्त्यमा हावा एक नयाँ मोडेल पुगेको छ। यसलाई मा, अघिल्लो लडाकु तुलनामा त्यहाँ तेस्रो बन्दूक, साथै विमान को 680 मी / घन्टा गति पुग्न सक्दैन थियो।
को ला-7 को सिर्जना नेतृत्व गर्ने मान्छे - वीर्य Alekseevich Lavochkin। उहाँले - सुन medalist, 1918-1920 मा उहाँले लाल सेना र फ्रंटियर सेना मा सेवा गरे। त्यसपछि मास्को उच्च tehuchilische (अब MSTU। Bauman), उहाँले इन्जिनियर Aeromechanics को पेशा प्राप्त जहाँ unlearn। आफ्नो थियोसिस को विषय भएको बमवर्षक विकास सँग सम्बन्धित थियो।
Semyon को सोभियत संघ को छिटो लागि विमान डिजाइन देखि संलग्न गरिएको भएको लेट 20 का, पहिलो सुरु aviakonstruktorskoy उद्योग मा काम गर्न, र त्यसपछि सेनानी मा काम गर्न जाने। को 30 सेकेन्ड को दोस्रो आधा, यो बेचैन भयो जब सोभियत सरकार संसारमा वायु सेना को विकास गर्न विशेष ध्यान गर्ने निर्णय गरे। एसएन संग पहिलो Lavochkin Lyushin विमान LL-1, डायनेमो rektivnymi बन्दुक संग सशस्त्र सिर्जना गरियो। पछि उल्लेखनीय डिजाइन रेखाचित्र युक्त, को प्रोटोटाइप म-301 आए। ला7यसको उपस्थिति ईन्जिनियरिङ् Undertakings बीउ ती वर्ष Alekseevich owes।
गति र विमान ला-7 को आरोहण को दर, सिद्धान्त मा, ला-5FN ती तुलना थिए। सीमित लडाकु गति थियो 680 मी / घन्टा (जब6हजार मिटर एक उचाइ मा उडान।), देशमा सीमा मूल्य - 597 मी / घन्टा। 10 मी 750 मिटर - सीमा ला-7 यात्रा 635 मी, छत उचाइ थियो।
प्रति मिनेट 1098 मीटर - लडाकु ओर्लन्छन्। मिसिन लम्बाइ - 8.60 मिटर, उचाइ - 2.54 मिटर खाली वजन -। 2605 किलो लोड - 3265 किलो। भाग लडाकु को क्षेत्र - 17.5 वर्ग। एम अधिकतम टेकओफ वजन -। 3400 किलो। विमान को Wingspan - 9.80 मिटर ला-7 इन्जिन -। तीन प्रकारका एक 82FN-DB, DB-83 लडाकू वा 71. 1850 एक thrust अश्वशक्ति (1380 किलोवाट बराबर छ जो) छ। एक मौलिक ला-7 को बीच अघिल्लो विमान देखि मतभेद को - (कारण धातु छेउमा सदस्यहरूलाई) हल्का डिजाइन।
विमान ला-7 को लडाई उपकरण नियम, दुई 20-मिमी तोप प्रकार ShVAK वा बी-20 कैलिबर को समान प्रकारको तीन बन्दुक रूपमा थिए। तिनीहरूले तिनीहरूलाई hydromechanical synchronizer स्थापना गरेर शट को प्रोपेलर को ब्लेड हिट रोक्न सक्षम थिए। एक बन्दूक लागि गोला, बारूद साधारण ShVAK प्रति हतियार 200 राउंड्स थियो। पनि बारूद गोले complemented हतियार-भेदी Incendiary प्रकार (100 मिटर दूरी संग 22 मिमी गर्न हतियार पियर्स गर्न सक्षम), साथै खण्डीकरणको क्रमलाई Incendiary बारूद प्रकार। विमान पखेटामुनि सेट बम (अप प्रत्येक भाग मा 100 किलो गर्न) हुन सक्छ। यी अधिकांश थिए गोले प्रकार फैब-50 र 100, ZAB-50, 100 (- 50 वा 100 किलो सबस्क्रिप्ट एउटा ठूलो बम सङ्केत गर्छ)।
सैन्य विशेषज्ञहरु समय विमान ला-7 समय देखि हाइड्रोलिक्स काम गर्न इन्कार गर्न भनेर औंल्याए। यो एकदम स्थिर र लडाकु इन्जिन थियो। कारण इन्जिन हावा intakes को भाग विमान थिए भन्ने तथ्यलाई गर्न, तिनीहरूले टेकओफ र अवतरण समयमा धूलो सम्पत्ति संग भरा भएका थिए। तसर्थ, इन्जिन काम गर्न इन्कार गर्न सकेन। यो सम्पत्ति राज्य परीक्षण मा विशेषज्ञहरु अनदेखी छ: स्वीकृति कुनै धूलो हुँदा हिउँदमा स्थान लियो।
यो ला-5FN मा इन्जिन को ला-7 भन्दा धेरै rarer अस्वीकार भनेर पहिचान गरिएको छ। तेल कूलर विमान को fuselage अन्तर्गत स्थित, र किनभने यो को सानो घर मा धेरै तातो (40 हिउँदमा डिग्री र गर्मी मा 55) थियो। पाइलटहरूले खातामा ककपिट इन्जिन ले निकास ग्याँसहरु गिर, र अक्सर ग्लास condensate मा गिरा छन् भन्ने तथ्यलाई लिएर एक कठिन समय छ।
यस्तै उत्पादनहरु संग तुलना: सिद्धान्त र अभ्यास
परिवार कल्याण-190 र "Messerschmitt-109" - सोभियत उड्डयन अधिकांश पाठ्यपुस्तकहरु मा एक तस्वीर छ जो ला-7 विमान, अक्सर एक लडाकु, आफ्नो जर्मन समकक्षों गर्न टाढा उच्च रूपमा कथित छ। तर, पाइलटहरूले आफूलाई जर्मन विमान विरुद्ध लडाई धेरै कठिन थियो बताए। उदाहरणका लागि, एक गोता प्रदर्शन केही सोभियत किनेकी अनुसार, "जर्मन" यो मिसिन भन्दा धेरै राम्रो थियो। तसर्थ, शत्रु एरोब्याटिक्स जस्तै हुन्थे भने लडाई जीत, सकेजति सामान्यतया केवल सोभियत वायु सेना को सबै भन्दा अनुभव पाइलटहरूले।
तर, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यो ला-7 यस्तो अवस्थामा, कारण गति को एक तेज सेट गर्न लाभ दिने। जर्मन नजिक शत्रु आक्रमण सक्छ प्राप्त गर्न व्यवस्थित भएको। तर संकेतक मोड्नु अर्धव्यास (तेर्सो maneuverability) ला-7 मा जर्मन विमान भन्दा श्रेष्ठता बताउनुभएको अनुमति दिन्छ। बारेमा 190 किलो / वर्ग मीटर: यो कम सोभियत लडाकु भाग लोड कारण थियो। (जब "जर्मन" - 200 भन्दा बढी किलो / Sq.m.)। त्यसैले ला-7, 3-4 सेकेन्ड भन्दा छिटो बारी गर्नुभयो उदाहरणका लागि, "Focke-ब्वाँसो"।
ला-7 - यो तिनीहरूको लडाई मिशन गरे जो एक विमान, छ Kozhedub - पौराणिक पायलट, सोभियत संघ को हिरो तीन पटक। उहाँले ला-5, जो तल धेरै दर्जन विमान ल्याएको छ को कर्ण मा सुरु बाटो झगडा। Peres ला-7, Kozhedub triumphantly बर्लिन नजिकै लड समयमा यसको लडाई मिशन पूरा, 17 जर्मन लडाकू नष्ट गरे।
विमान को सक्रिय लडाई प्रयोग जुन 1944 मा सुरु भयो। यो लडाकु सोभियत वायु सेना को गार्डस regiments विशेष सम्मान मा भएको छ। दिग्गज ला-7 सकारात्मक ऐ कुरा बारे Pokryshkin - अल, सोभियत संघ को हिरो तीन पटक। यो विमान मा लडाई मिशन पूरा मा, त्यो तल 17 जर्मन लडाकू सहित प्रतिक्रियाशील "Messerschmitt-262" गोली। ठूलो सोभियत पायलट को ला-7 नमूना उत्कृष्ट maneuverability, गति, हतियार शक्ति देखे: यो बिल्कुल मिश्रणों को आफ्नो मनपर्ने "सूत्र" एक्का संग "गति, युद्घाभ्यास र आगो।"
नायक को विमान
ला महान देशभक्तिपूर्ण7इतिहासकारहरूले परंपरागत गर्ने 64 WINS गोल इवान Nikitovich Kozhedub को नाम संग सम्बन्धित (त्यहाँ अब कुनै पनि एक एक्का विरोधी हिटलर गठबन्धनको थियो)। खाता लडाई पायलट मा मार्च 1943 मा खुलेको सैन्य विमान ला-5। पछि Kozhedub एक लडाकु विमान यस प्रकारको 146 sorties बनाउँछ र 20 ढकढक्याउन "जर्मन"। मई 1944 मा, पायलट मुद्रा मा संकलित थियो, चाखलाग्दो ला-5FN, किसान गरेको Stalingrad क्षेत्र को एक सारियो। यो विमान मा, उहाँले7एकाइहरु शत्रु विमान नष्ट गरे। अगस्ट मा Kozhedub रेजिमेन्ट सोभियत वायु सेना विमान7लडाकूको लागि नयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो। विमान इवान Nikititch यस प्रकारको उहाँले विश्व को अन्त सम्म लडे।
को लडाई मिशन ला7Kozhedub मारा थियो एक समयमा, आफ्नो इन्जिन स्टलगरिएको। शत्रु गर्न आत्मसमर्पण गर्न निर्धारण, सोभियत एक्का जमीन मा वस्तुहरु को एक एक हवाइजहाज पठाए। तर लडाकु तल swoop गर्न थाल्दा, इन्जिन अचानक, सार्दा ला-7 चोटी देखि फिर्ता एयरफील्ड गर्न कमाएका र Kozhedub। युद्ध भर, इवान Nikitich एक लडाई मिशन मा 330 पटक उड्यो, भाग 64 शत्रु विमान नष्ट जो 120 हावा लडाई, मा। उहाँले तीन पदक "गोल्ड स्टार" सम्मानित गरिएको थियो।
गैर-बुना सामाग्री: घनत्व, उत्पादन र प्रयोग
वेल्डेड जोइन्टहरूमा को अल्ट्रासोनिक परीक्षण र नियन्त्रण प्रविधिको विधिहरू
संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली जलविद्युत शक्ति स्टेशन। दस संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली जलविद्युत शक्ति स्टेशन को
एङ्कर श्रृंखला। लङ्गर उपकरणको घटक
स्यान्डब्लास्टिङ लागि खुम्च्याउने। स्यान्डब्लास्टिङ
धातु काटन लागि उपकरण। प्लाज्मा धातु काटन लागि उपकरण
केही प्रभावकारी तरिका: बगैंचामा यो तान्नु हटाउनेछ कसरी प्राप्त गर्न
"Pancreatin 25 एकाइहरु": प्रयोग र analogues लागि निर्देशन
मंगल युद्ध लगहरू: गाइड
आगोको प्यासिफिक अंग: कहाँ छ र किन यो भनिन्छ
गुणस्तर व्यवस्थापन: मुख्य समूह र आफ्नो विशेषताहरु
सपना व्याख्या: के सपना बच्चा - केटी
गार्ड cruiser "लाल काकेशस": फोटो, चालक, रेखाचित्र, मोडेल, लम्बाइ
आउटलुक कसरी कन्फिगर गर्न: साईट प्रयोगकर्ताहरूको लागि सुझाव
बेलारुस को रिजोर्ट प्रमुख। Gomel क्षेत्र
ससेज बलमा को शिल्प: तपाईं घुमा को कला मा शुरुवात जान्नु आवश्यक
को iPhone मा एक रिङटोन कसरी सेट गर्न?
Atherosclerosis - एक खतरा र खतरा